ဘဝနဲ့အခဈြ Archives - ThutaSone
ရေစက်ရှိတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ဝေးဝေး ကိုယ့်အနားကို အလိုလို ရောက်လာမှာပါ
ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ရေစက်ရှိတဲ့သူတွေက ကိုယ့်အနား အလိုလို ရောက်လာမှာပဲ…. ဘယ်လောက်နီးနီး ရေစက်ကုန်သွားတဲ့ သူတွေကတော့ ခွဲကြရဦးမယ်…. ဘဝဆိုတာ… အရာရာစိတ်တိုင်းကျတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး… စိတ်မပျက်ပါနဲ့…. ဒုက္ခဆိုတာရှိလို့ သုခအမှန်ရှာရင်းနဲ့ သစ္စာကို ရှာတွေ့သွားကြတာပဲ မဟုတ်လား… လောကနိယာမတွေက ရိုးရိုးလေးတွေးရင် ရှင်းရှင်းလေးပေါ်လာတယ်…. ဆုံလာကြသမျှ တစ်နေ့ခွဲရမယ်… ဖြစ်လာတာမှန်သမျှ တစ်နေ့ပျက်ရမယ်.. […]
လောကကြီးမှာကိုယ့်ကို ထားခဲ့တဲ့သူကို မျှော်လင့်နေမယ့်အစား ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ…
ကိုယ့်ကို ထားခဲ့တဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေကို မျှော်လင့်နေမယ့် အစား ဖြစ်နိုင်မယ့် အရာကိုပဲ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့် အပေါ်မှာ ဘာခံစားချက်မှ မရှိတော့တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ဒုက္ခခံနေလို့လည်း အပိုပါပဲ။ ထားသွားတဲ့သူက ပြန်လာမှာလည်း မဟုတ်တော့ဘူး။ သူကတောင် ကိုယ့်အပေါ်ကို စိတ်ကုန်သွားလို့ စွန့်ပစ်ခဲ့သေး […]
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောက်ျားမရှိပါဘူး ယောက်ျားကိုမနိုင်လို့ လွှတ်ထားရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ယောက်ျားတွေပဲရှိတယ်
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောက်ျားမရှိပါဘူး ယောက်ျားကိုမနိုင်လို့ လွှတ်ထားရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ယောက်ျားတွေပဲရှိတယ် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောက်ျားမရှိပါဘူး..။ ယောက်ျားကိုမနိုင်လို့ လွှတ်ထားရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ယောက်ျားတွေပဲရှိတယ်..။ မိန်းမ စကားအရမ်းနားထောင်နေလိုသင့်ကို သင့်friတွေမယားကြောက်လို့အမည်တပ်ပေမယ့်..၊ ဘာကြောင့် လဲ သင့်မှာသင့်မိသားစု သင့်ကလေးကိုငဲ့လို့ သင့် သင်friတွေနဲ့လျောက်မသွားတဲ့အခါ.. သင့်အမည်တပ်ခံရပေမယ့် သင့်ကလေးတွေဇနီးအတွက်တော့ ယောက်ျားကောင်းဖြစ်နေမှာပါ..။ အချိန်တန် သင်နေမကောင်းအိုနာလာရင် သင့်ဇနီးနဲ့သင့်ကလေးတွေကပဲ သင့်ကိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်..။ မကောင်းတဲ့friအများစုကတော့ […]
အရမ်းကောင်းလို့မျှဝေလိုက်ပါတယ်… ”အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ တွင်းတစ်တွင်းထဲ ခုန်ချလိုက်သလိုပဲ”
January 7, 2020 ThutaSone 0
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ တွင်းတစ်တွင်းထဲ ခုန်ချလိုက်သလိုပဲ။ ဒီတွင်းဟာ ဒုက္ခတွင်း မဖြစ်နေဖို့လိုတယ် ။ တွင်းအတိမ်အနက်ကို မသိပဲ ရမ်းသန်းခုန်ချလိုက်လို့ တွင်းအောက်ခြေရောက်မှ အမှိုက်တွင်းဆိုသေရော … နက်ရင်နက်သလောက်ပြန်တက်ရခက်သွားပြီ တွင်းထဲကအမှိုက်တွေနဲ့ နေပေရော့ တစ်သက်လုံး …. တစ်ချို့တွင်းတွေက ဖြတ်လျှောက်သွားရုံနဲ့ အနံ့သက်မကောင်းလို့ ကျော်သွားလို့ရတယ် ။ […]
”လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ဒီလိုမလွတ်လပ်နိုင်ရှာတဲ့ အဖြူအစိမ်းလေးတွေ” ရှိတယ်ဆိုတာ…
January 5, 2020 ThutaSone 0
လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ဒီလိုမလွတ်လပ်နိုင်ရှာတဲ့ အဖြူအစိမ်းလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ စကားတောင်စားလို စကားကြွယ်တဲ့ ဟိုလူကြီးတွေသိပါသလား။ ဒီလိုကလေးတွေ ဒီကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေအတွက်ကော ဘယ်လို မဟာစီမံကိန်းတွေ အနုသုခုမ မြောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိပါသလဲ။ဆရာတစ်ယောက်၏ ရင်တွင်းဝေဒနာဖြင့် အဖြေရှာပေးကြပါကုန်။ credit myanmar daily news unicode version လှတျလပျရေးနမှေ့ာ ဒီလိုမလှတျလပျနိုငျရှာတဲ့ […]
မိဘနှစ်ပါးလုံးကို မြုပ်နှံထားတဲ့ သင်္ချိုင်းမြေပုံအနားသွားပြီး “မေမေ”ဆိုပြီး အော်ခေါ်နေခဲ့တဲ့ သားလေးရဲ့အဖြစ်…
January 2, 2020 ThutaSone 0
လူတိုင်းကတော့ တစ်ချိန်ချိန်တစ်နေ့နေ့မှာ ကိုယ်ချစ်ရသူတွေနဲ့ ကြုံဆုံ ၊ ကွဲကွာ ၊ ထားရစ် ခဲ့ရမှာပါပဲလေ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း 2နှစ်သားအရွယ် မလေးရှားနိုင်ငံက ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ ကားအက်ဆီးဒင့်ကြောင့် မိဘနှစ်ပါးလုံးကို တစ်ကြိမ်ထဲမှာပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ။ မိခင်ကို အတော်လေးလွမ်းဆွတ်နေခဲ့တဲ့ သားငယ်လေးဟာ မိဘနှစ်ပါးလုံးကိုမြုပ်နှံထားတဲ့ သဲမြေပုံလေးအကြား သဲမြေတွေနဲ့ဆော့ကစားနေခဲ့တာကို မခံစားနိုင်လို့ […]
ဘဝပေးအခြေအနေကြောင့် ​ကျောက်ဆည်ကနေ မန်းလေးအထိ ထီလာရောင်းရရှာတဲ့ အဖိုးအို
November 15, 2019 ThutaSone 0
လူတွေဟာ ဘဝပေးကုသိုလ်အရ လက်ရှိဘဝမှာ ရုန်းကန်မှုတွေ လုပ်နေကြရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အေးချမ်းပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ဆိုးရွားလွန်းကြပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် အနားယူချိန်တန်ပေမယ့်လည်း ဘဝကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှုားနေကြရတုန်းပါပဲ။ ဒီလို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတို့ ကို မြင်ရင် ရင်ထဲမကောင်းသလို အမြဲတမ်းကူညီဖြစ်အောင် ကူညီပေးကြတဲ့ လူတွေ ရှိပါတယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးမယ့် သတင်းလေးကတော့ […]